IApartment yeBoutique enomtsalane kunye nengenasiphako - I-Airbnb
IApartment yeBoutique enomtsalane kunye nengenasiphako
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguYecenia
Igumbi le-boutique elithandekayo nelingenabala! Uyilo lwangoku kunye nolucolekileyo, olukwindawo yokuhlala ekufutshane kakhulu neendawo zokuthenga, inendawo yokuqubha kwindawo eqhelekileyo. Sinemithetho yokucoca engqongqo ukunika iindwendwe zethu uxolo lwengqondo.
Iintsapho zinokuphumla ngokukhululekileyo emva komhla wokuzonwabisa kwithafa, ifulethi ine-Smart TV, i-NETFLIX kwigumbi lokuhlala kunye negumbi eliphambili, kunye neendawo eziluhlaza. Uqhagamshelo lwe-intanethi olugqwesileyo
Indawo yethu yokuhlala yindawo enokuchukunyiswa kwangoku, ithambile kwaye icocekile, zonke iinkcukacha zicingwe ngothando, zifuna ukwenza ukuba uzive usekhaya. Sijonge ukunika iindwendwe zethu indawo ezolileyo, ekhuselekileyo nekhululekileyo; ilungile kwiintsapho, uhambo lweshishini okanye kubahlobo abafuna ukonwabela ithafa. Yindawo enomtsalane, ezele ngamandla alunge kakhulu!
Yindawo yokuhlala, eneendlela eziqaqambileyo nezikhuselekileyo zokungena. Indawo yokuthenga yeViva yimizuzu eli-10 kude kwaye indawo yokuthenga yePrimavera kunye nendawo yokuthenga yaseVillacentro ikumizuzu eli-15 kude. Uya kufumana iiresityu zokutya okuqhelekileyo kwe-llanera kufutshane kakhulu, kwaye siya kukunika uluhlu lweendawo ezikhethekileyo onokuthi uzonwabele.
Umbuki zindwendwe ngu- Yecenia
Ukufumaneka kwethu (okwam okanye komyeni wam) kuya kuba kwinkonzo yeendwendwe zethu ukuhoya nasiphi na isicelo abanaso
Inombolo yomthetho: 109392